Ulwimi olukhawulezayo lunokuhambelana nenkqubo entsha yokusebenza kaGoogle | Ndisuka mac
Ulwimi olukhawulezayo lunokuhambelana nenkqubo entsha kaGoogle
URuben inyongo | | Amahemuhemu
La Ukudibana phakathi kweqonga ledesktop kunye namaqonga ahambayo bekuhleli etafileni iminyaka ethile. Kwi-macOS sibona iimpembelelo ezivela kwi-iOS kwaye ngokuchaseneyo. IOS 11 ngumzekelo ocacileyo, ngakumbi ukuba sijonga indlela ejongeka ngayo kwi-iPad. KuGoogle bafuna ukwenza okufanayo - okanye ke kuye kwavakala ngalo ixesha elide- kwaye inkqubo yokusebenza abathi basebenze kuyo yaziwa phantsi kwegama leFuchsia.
Le nkqubo yokusebenza inokusebenza kwiikhompyuter ezininzi (ipilisi, ephathekayo, ehambayo, njl.), kubonakala ngathi ifuna ukuya kwintengiso kunye nokuhambelana okukhulu kunokwenzeka. Kwaye okokugqibela okwaziwayo kukuba abaphuhlisi benkqubo yokusebenza ye-Intanethi ukukhangela indlela yokwenza iFuchsia ihambelane nolwimi lwenkqubo ye-Swift ukusuka Apple.
Eli nyathelo liya kubaluleka kakhulu kubaphuhlisi ukuba babe nomdla omkhulu kwinkqubo entsha yokusebenza. Ngele ndlela Nasiphi na isicelo esenzelwe i-iOS, i-macOS, i-watchOS okanye i-tvOS, inokulungelelaniswa ngokulula kumaqela exesha elizayo kunye neFuchsia; Ngaphandle koko, umphuhlisi we-Swift kufuneka alungelelanise yonke indalo yakhe kwasekuqaleni kwaye avavanye ukuba ingaba yintoni na imveliso kwamanye amaqonga.
Kwelinye icala, kwaye balatha kwisango 9to5mac, Ulwimi lwenkqubo ye-Apple, eyaziswa ngo-2014, iphumelele isabelo esikhulu semarike kwiminyaka emi-3 kuphela. Ngaphezulu, uhamba phambi kweelwimi ezingama-20 ezithandwa kakhulu kwihlabathi. Kwakhona, khumbula ukuba iApple yiyo ukukhuthaza olu lwimi lwenkqubo kwiiYunivesithi.
Kwangokunjalo, uGoogle akaphawulanga ngalo mbandela kwaye akakavezi-ngaphandle kwento eyaziwayo ukuba ikhona malunga nonyaka-zithini iinjongo zale Google Fuchsia intsha kunye ukuba iya kuba yindawo yokugqibela ye-Android kunye ne-ChromeOS. Okanye, ngokuchaseneyo, Baya kuhlala kunye kunye nokongeza ukhuphiswano ngakumbi kwicandelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Amahemuhemu » Ulwimi olukhawulezayo lunokuhambelana nenkqubo entsha kaGoogle
Ndicinga ukuba unolwazi olungelulo, uGoogle ngekhe anike uluntu ngakumbi ukukhawuleza, ngakumbi ukuba bafumene nje kwaye baqhuba i-kotlin.
Yenza imifanekiso emihle ngeFoto Montage, xa kuthengiswa ixesha elincinci
Inqaku elimnandi le-2 elilinganiselweyo kwi-Mac App Store